विज्ञहरू बारा र पर्सामा आएको ‘टोर्नाडो’को नेपाली नाम राख्न बहसमा जुटे !
नेपालको बारा, पर्सामा आएको ‘टोर्नाडो’को नेपाली नाम राख्न विज्ञहरू बहसमा जुटेका छन् । यसरी भूमरी जसरी सोली आकारमा आएकाले यसको नेपाली नामकरण स्थानीय परिचय दिने गरी राखिनुपर्ने बहस चलेको छ । सोही अनुसार नै जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थित वातावरण विभागलगायत
नेपाल भारत सीमा ३ दिन बन्द हुने
भारतसँग सीमा जोडिएका बैतडीसहित सुदूरपश्चिमका सबै नाका ३ दिनका लागि बन्द हुने भएका छन् । यही चैत्र २८ गते भारतमा हुने लोकसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल भारत सीमानाका बन्द हुने बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलले जानकारी दिनुभयो । भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशसँग जोडिएको सुदूरपश्चिमका सबै नाकाहरु चैत २६ गतेदेखि २८
भ्रष्टाचारबाटै २४ हजार तलब हुने सुब्बाले कमाए आधा अर्ब ! पुरा पढ्नुहोस
नायब सुब्बा निजामती सेवामा सानै पद मानिन्छ। यिनको तलब २४ हजार ५०० मात्रै छ। तर, अकुत सम्पत्ति र आर्जन गरेको अभियोग लाग्नेमा धेरैजसो सुब्बा नै छन्। ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा सुब्बा मुछिएकाले पनि अनियमिततामा उनीहरु बढी संलग्न रहेको पुष्टि हुन्छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीका तीन लेखापाल (सुब्बा) करोडौँको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन्।
बारा,पर्सामा विध्वंश मच्चाउने हावाहुरी ‘टोर्नाडो’ बएको पुष्टि ! पुरा पढ्नुहोला
गत आइतबार बारा, पर्सामा विध्वंश मच्चाउने वर्षासहितको आँधीबेहरीको नाम ‘टोर्नाडो’ आएको पुष्टि विज्ञले गरेका छन् ।नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का प्राज्ञ तथा वरिष्ठ मौसमविद् मदनलाल श्रेष्ठसहितको एक टोलीले गरेको अध्ययनले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक टोर्नाडो आएको पुष्टि गरेको हो । श्रेष्ठ जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्व
काठमाडौंमा ३५० काग बने बर्डफ्लुको शिकार !
काठमाडौं उपत्यकामा बर्डफ्लुको संक्रमण फैलिएको छ । काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा बर्डफ्लुको संक्रमणबाट तीन सय ५० काग मरेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ । बेलायती दूतावास र राहदानी विभाग क्षेत्रमा भटाभट काग मरेपछि गरिएको नमुना परीक्षणमा एच५एन१ संक्रमण भएको देखिएको विभागले जनाएको छ । ‘एक हप्तामा डेढ सय काग मरेका छन्, नमुना परीक्षण गर्दा
बारा र पर्सको हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रमा रहातको नाम गरेर फोटो खिचाएर चर्चामा आउनेहरुको लागि ब्यङ्ग !
बारा र पर्सको हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रमा रहातको नाम गरेर फोटो खिचाएर चर्चामा आउनेहरुको लागि ब्यङ्ग
प्रधानमन्त्री आउने भएपछि भत्काउनपर्ने सडकमा सवा करोड खर्चेर अलकत्रा !
भत्काउनुपर्ने सडकका लागि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । धरान-विराटनगर ४९ किलोमिटर ६ लेन सडकअन्तर्गत भानु चोकबाट लक्ष्मी चोकसम्मको कोसी लोकमार्गको बजेट खन्याइएको हो । क्षेत्राधिकारमा नपर्ने सडकमा उपमहानगरपालिकाले बजेट अन्याउनु गलत भएको स्थानीयको गुनासो छ । सडक विभागले ६ लेनको बनाउँदै आएको सडकमा
अब विद्यार्थी फेल भए शिक्षकलाई कारबाही, ‘डी’ र ‘ई’ ग्रेड ल्याए विषय शिक्षकनै हटाइने !
संघीय संसदको उपसमितिले परीक्षामा विद्यार्थी फेल भए शिक्षकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमातहत गठित उपसमितिले पठनपाठनमा सबैभन्दा बढी शिक्षक जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै यस्तो सिफारिस गरेको हो। एसईईमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्यार्थीले ‘डी’ र ‘ई’ भन्दा कम ग्रेड ल्याए प्रधानाध्यापकको ग्रेड रोक्कासहित कारबाही
शिक्षकले एसईई दिँदै गरेकी छात्राको चिट भनेर प्याड खोसेपछि !
पञ्चदेव विनायक नगरपालिका १ कुइकाकी कल्पना रिमाल चैत १० बाट सुरु एसईई परीक्षा दिन ८ गते नै घरबाट निस्किइन् । सदरमुकामस्थित विद्या मन्दिर मावि विनायकको परीक्षा केन्द्र परेको छ । बिरानो ठाउँ गएर परीक्षा दिँदा कुनै अप्ठ्यारी पर्ने हो कि भन्ने डरले उनलाई सताएको थियो । अर्कोतिर बाहिर डेरा गरेर
जनकपुर बम काण्डमाथि सात बर्षपछि सुनुवाई,पूर्वमन्त्री सञ्जयकुमार साह योजनाकार भएको दाबी !
सात वर्षअघि जनकपुरमा भएको बम विष्फोटको मुद्दामाथि आइतबारदेखि जिल्ला अदालत धनुषामा सुनवाइ सुरु भएको छ । जनकपुरस्थित रामानन्द चोकमा २०६९ वैशाख १८ गते गराइएको शक्तिशालि बम विस्फोटमा ५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ३२ जना घाइते भएका थिए । त्यसबेला नयाँ संविधानमा मिथिला राज्य माग गर्दै मिथिला राज्य संघर्ष समितिको